MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 819
>10th May 2009 – MoeMaKa Weekly Radio Program
> မေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ မိုးမခ ရေဒီယို အမေနေ့ အစီအစဉ်များ မြင့်မိုရ်ထက် မြင့်သော – မေဆွိ သတင်းတိုထွာ၊ သီချင်းပဒေသာ တပတ်အတွင်း အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းများ လောကဓံကို သည်းခံခြင်း – ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် ဆစ်ဒနီသို့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း လာရောက်ခြင်းအပေါ် သဘောထား စပ်မိစပ်ရာ ဘာညာကွိကွ (ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ ဆန်ဖူလုံရေး အာမခံချက် နဲ့ အိန္ဒိယသံချပ်) နှစ်ပတ်လည် မြန်ပြည်လေဘေး ကရုဏာတေး-သံစဉ်ရတနာ) ဆစ်ဒနီမြို့ သိမ်သမုတ် မင်္ဂလာ တေးသစ်- ဦးပန်တျာ၊ သံစဉ်ရတနာ အထူးကဏ္ဍ – အမေနေ့ စာပေဟောပြောပွဲ – ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဦးသုခ မာမာအေးရဲ့...
>Naing Lin Aung – BlogaNext Medium for Burmese
> ဘလော့ (blog) သို့မဟုတ် မီဒီယံသစ် နိုင်လင်းအောင် မေ ၁၁၊ ၂၀၀၉ လွန်ခဲ့သည့် ၃နှစ် ၀န်းကျင်က မြန်မာနိုင်ငံတွင် `ဘလော့´ ဟုဆိုလိုက်လျင် မီဒီယာနယ်ပယ်မှသူများ ကိုယ်တိုင်ပင် `ဘလော့´ ဆိုတာ သတင်းလား၊ မှတ်တမ်းလား၊ သုံးသပ်ချက် အမြင်လား၊ ဘယ်သူတွေက ရေးတာလဲ စသဖြင့် ဝေေ၀၀ါးဝါး ရှိနေခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် လူငယ် ဘလော့ရေးသူများ (ဘလော့ဂါ) က စုပေါင်းပြီး ဘလော့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဟောပြောပွဲများ၊ ဘလော့ဂါနေ့ စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည့် အခါ ဘလော့ဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုကြောင်း ရေးရေးသိလာကြသည်။ အဆိုပါ မြန်မာ ဘာသာဘလော့များကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် လူငယ်များကပင် မြန်မာဘာသာ ဘလော့ တခုကိုရေးဖို့...
>Burma’s prisons and labour camps: Silent killing fields
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အကျဉ်းသားများ ကျန်းမာရေး စိုးရိမ်ရမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၈မေ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် နိုင်ငံရေးသမား အနည်းဆုံး ၁၂၇ ဦး ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်းနေပြီး ကုသမှု အမြန်ဆုံး လိုနေသည်ဟု အကျဉ်းသား စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့တခုက ပြောသည်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ အခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ၏ ယနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်တွင် ထိုသို့ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအသင်းသည် AAPP ဟု ထင်ရှားသည့် အသင်း ဖြစ်သည်။ AAPP က ယနေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဖြန့်လိုက်သည့် အစီရင်ခံစာကို “အသံတိတ် သတ်ကွင်း – ထောင် နှင့်...
>let’s make mistakes ( final part )
> မှားလိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း (အပိုင်း ၂)ဇာနည်ဝင်းမေ ၁၁၊ ၂၀၀၉ ကာတွန်းဆရာနဲ့သတ်ပုံအော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းတပုဒ်ကတော့ သတ်ပုံ အကဲဆတ်သူတွေကို သရော်ထားတယ်လို့ ယူဆစရာ။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူက စာရေး အကူအညီတောင်းတာကို သတ်ပုံမှားလို့ မကယ်ဘူး တဲ့။ သတ်ပုံသမားကို ပြောင်ထားတာ ဖြစ်မလားး) ကာတွန်းဆိုတာကလည်း အမျိုးမျိုး အဓိပ္ပာယ်ကောက်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။ ကာတွန်းဆရာတွေက သတ်ပုံမှားလေ့ရှိသူတွေပဲ။ သူတို့က ကာတွန်းလက်ရာ နဲ့ ကာတွန်း အတွေးကို ဦးစားပေးရတော့ သတ်ပုံတွေ၊ အဖြတ်အတောက်တွေက နောက်ဆုံး အရေးပါမှု အဆင့် ရောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်မျိုးကြီး ကျဆုံးသွားတဲ့အခါပြည်ပမှာ ရေးတဲ့ မြန်မာစာတွေမှာ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ ကို တွေ့ရသလို ကျနော်၊ ကျမ ဆိုပြီး အသံထွက်အတိုင်း ရေးထားတာလည်း...
>SPDC spends only 0.3 percent of GDP on health
> GDP ၀.၃% ကို ကျန်းမာရေးအတွက် သုံးသည့်နိုင်ငံမှ ကလေးများဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၁၊ ၂၀၀၉လွန်ခဲ့သည့် ၃ ရက်က တွေ့ရသည့် ရန်ကုန်မြို့ပြင် လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်မှ ကလေးငယ်တချို့။မြန်မာ ကလေးများမှာ သင့်လျော်သည့် ရေ နှင့် သန့်ရှင်းရေးစနစ် မရှိဘဲ နေထိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။မြန်မာအစိုးရက ကျန်းမာရေးအသုံးစရိတ်အဖြစ် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး (GDP) ၏ သုည ဒဿမ သုံး (၀.၃) ရာခိုင်နှုန်းသာ အသုံးပြုသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနည်းဆုံးသော ပမာဏ ဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် UNDP က ဆိုသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ဆင်ခြေဖုံးဒေသ ၀င်ငွေနည်းလူထု အများအပြားမှာ တရက် ထမင်းတနပ် ၀ယ်စားရန်ပင် မတတ်နိုင်ကြပေ။ အစိုးရက...
>dagon taryar by htain linn
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၃၆)ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရှင်သန်သူ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာထိန်လင်း မေ ၁၁ ၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက တွေ့ရသော ဒဂုန်တာရာ (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ) မေလ ၁ဝ ရက်နေ့ဟာ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာရဲ့ အသက် ၉ဝ ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်ကနေ ဒီကနေ့အထိ စာပေပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဆရာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူဖြစ်သလို တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ ဒဂုန်တာရာကို ၁၉၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁ဝ ရက်နေ့က ကျိုက်လတ်မြို့နယ်က ထိုင်ကူမြစ်တန်းရွာမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကျိုက်လတ်မြို့ အမျိုးသားကျောင်း၊ ရန်ကုန် ရေကျော် မက်သဒစ်ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ကြားပြီး...
>fire festival in Rangoon
> ရန်ကုန်မြို့ မီးနင်းပွဲ မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၁၀၊ ၂၀၀၉မေလ ၈ ရက်နေ့က မီးနင်းပွဲတခုတွင် ပါဝင်ဆင်နွဲနေသော ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အမျိုးသမီးတဦး။မီးတောက်နေသော မီးသွေးခဲပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ရသည့် မီးနင်းပွဲကို ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကန်ဘဲ့အရပ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းလုံးတွင် ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း တထောင်ကျော် ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဟိန္ဒူဘာသာဝင်မှာ မြန်မာပြည် လူဦးရေ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းထက် နည်းပါးသည်။ (ဓာတ်ပုံ-Getty Images) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Doctor visits ailing Daw Suu
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆေးကုသခွင့် ပြန်ရပြီAP သတင်းဌာနမေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ မြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တို့က ထိန်းသိမ်းခံနေရသူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထံသို့ သွားပြီး ဆေးကုသနိုင်ရန် ဆရာဝန် တဦးကို ယနေ့ ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ဒေါ်စုသည် ခန္ဓာကိုယ် ရေဓာတ် ခမ်းခြောက်ကာ၊ သွေးပေါင်ချိန် ကျနေကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က စတင် တွေ့ရသည်။ ဒေါ်စု၏ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူများ၏ အဆိုအရ ဒေါက်တာပြုံးမိုအိသည် ယနေ့နေ့လည်တွင် ဒေါ်စုထံ သွားခွင့် ရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေါ်စု၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသမှု ထပ်မံ လိုအပ်ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်က ကြေညာချက် ထုတ်ထားသည်။ အာဏာပိုင်တို့က ဒေါ်စု၏ ဆရာဝန် ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းကို စစ်ဆေးမေးမြန်းရန်အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့မှ စပြီး...
>Cartoon Sawn Ngo – The Junta’s Newspaper always Wrong ?
> ကာတွန်း စောငို – သတင်းစာ မှားတယ် မေ ၁၁၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Khaing Mar Kyaw Zaw – To Every Mother
> အမေများ သို့ ခိုင်မာကျော်ဇော မေ ၁၁၊ ၂၀၀၉ “အမေများနေ့” တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က မင်္ဂလာအရှိဆုံး နေ့တနေ့ပေါ့။ ကျမရဲ့ မွေး၊ ကျွေး မိခင်များကတော့ ကျမနဲ့ အဝေးဆုံး ကမ္ဘာရပ်ခြားမှာ။ ‘အမိမဲ့ သား ရေနည်း ငါး’တဲ့။ ‘ခလုတ်ထိ အမိတ တ တတ်သတဲ့’။ အမေ မရှိတော့မှ အမေလို့ တမ်းတ ရတာများ အင်္သချေ အန္တတပေါ့။ အမေ့ကို လွမ်းလိုက်ရတာများတော့ ကမ္ဘာကြီးတောင် တုန်သွားတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Swan Yi – Mother Day Poem
> အမေနေ့ မောင်စွမ်းရည် မေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ဒီနေ့ အမေနေ့။ ဗမာ့အမေနေ့ အာရှ အမေနေ့ အာဖရိက အမေနေ့ ကမ္ဘာ့ အမေနေ့ အားလုံးရဲ့ အမေနေ့။ မနေ့ကလဲ အမေ ဒီနေ့မှာလဲ အမေ နက်ဖန်လဲ အမေ ထာဝရ အမေ။ မနှစ်ကလဲ အမေ ဒီနှစ်မှာလဲ အမေ နောင်နှစ်ကျလဲ အမေ ထာဝရ အမေ။ ဗုဒ္ဓကို မွေးတဲ့ အမေ အမေ့ကို မွေးတဲ့ အမေ အဖေကို မွေးတဲ့ အမေ ဆရာ့ကို မွေးတဲ့ အမေ လူအားလုံးကို မွေးတဲ့ အမေ ထာဝရ အမေ။ လင်ကွန်းကို မွေးတဲ့ အမေ လီနင်ကို...
>KIA Wants Peace but Gird for Fight
> ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) က လက်နက်မချနိုင်ဟု ဆိုမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၅မေ ၁၀၊ ၂၀၀၉KIA ကချင် စစ်သားများ (ဓာတ်ပုံ – Thomas Fuller) အပစ်ရပ်အဖွဲ့ကြီးတခု ဖြစ်သည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) က လက်နက်ချမည်မဟုတ် ဟု နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် သတင်းစာကို ပြောလိုက်သည်။ မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ရှေ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသည့် သူပုန်အဖွဲ့များကို လက်နက်ဖြုတ်ရန် သို့မဟုတ် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရန် ညှိနှိုင်းနေချိန်တွင် ထိုသို့ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ “မြန်မာပြည် အနာဂတ်အတွက် သင့်လျော်တဲ့ လမ်းပြမြေပုံ မရှိသေးဘူး” ဟု ဗိုလ်ချုပ် Gam Shawng Gunhtang က ပြောသည်။ သူသည် ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏...
>let’s make mistakes ( part 1 )
> မှားလိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း ဇာနည်ဝင်းမေ ၁ဝ၊ ၂ဝဝ၉ မဟေသီမဂ္ဂဇင်း (၂ဝဝ၈ ဇန်နဝါရီ) မှာ သတင်းတပုဒ် ပါလာတယ်။ “ပရဟိတ ဝန်ဆောင်ကျောင်းသို့ စေတနာဆင်များရဲ့အလှူ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့။ ပြောချင်တာ စေတနာဆင် ဆိုတဲ့ စကားလုံးပေါ့။ တကယ်တော့ စေတနာရှင် ဖြစ်ရမှာ မဟုတ်လား။ တယောက်က ဖတ်ပြ တယောက်က စာစီစာရိုက် လုပ်ပုံ ရတယ်။ ဒေသ တချို့မှာ “ရှင်” ကို “ဆင်” လို့ အသံထွက်ကြတယ်။ ဖတ်ပြတဲ့သူက အဲဒီဒေသခံ ဖြစ်နိုင်တယ်။ စာပြင်ဆရာ တယောက်မက ခန့်ထားပုံရတဲ့ အင်အားကြီး၊ ဝါရင့်မဂ္ဂဇင်းမှာလည်း ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ရှိသလားဆိုပြီး အံ့သြမသွားပါနဲ့။ အစဉ်အလာကြီးသော စာနယ်ဇင်း“ဒေါ်ဘုမ၏ နောက်စေ့ကွဲသွားခြင်းဟု ပြင်ဆင် ဖတ်ရှုပါရန်”...
>Win Myat – One Year After Nargis,avictim voice – Interview
> ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ လာကြည့်စေချင်တယ် ( ၁ နှစ်အကြာ – နာဂစ်မုန်တိုင်းက ကျန်ရစ်သူတဦးရဲ့ အသံ) ၀င်းမြတ် ဘိုကလေး ၊ မေ ၉ – နာဂစ်မုန်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို တိုက်ခတ်ခဲ့တာ တစ်နှစ် ပြည့်လွန်ခဲ့ပေမယ့် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသမှာ နေထိုင်သူတွေမှာ အခက် အခဲများနဲ့ ရင်ဆိုင် နေရဆဲပါ။ နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ်ပြီးခါစမှာ ကယ်ဆယ်ရေး ကူညီ ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းတွေ နှေးကွေးခဲ့သလို ယနေ့အချိန် အထိလည်း အကူအညီ ရရှိမှုတွေ နည်းပါး နေသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒေသ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဘိုကလေး မြို့နယ် အပိုင် လမုအုပ်လေး ကျေးရွာသား ကိုမျိုးမင်း(၃၀...
>U S citizens deported
> နအဖ အစိုးရက အမေရိကန် ဧည့်သည်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိစစ်နေ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ မေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ် လျက်ရှိသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသား အချို့အပေါ် နအဖ အစိုးရက စိစစ် ပြန်ပို့မှုများ ရှိနေသည် ဟုရန်ကုန်မှ ပြန်ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။ ရန်ကုန်သို့ အလည်အပတ် ဗီဇာဖြင့် ရောက်ရှိ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို မြန်မာ ထောက်လှမ်းရေးများက ပြန်လွှတ် (deport) ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အမေရိကန်နိုင်ငံသား နှစ်ဦးနှင့် လေယာဉ်တစီးထည်း စီးပြီး ဘန်ကောက်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား တဦးက ပြောဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်...
>Mar Mar Aye 276
> ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ်(၂ရ၆)သီချင်းရေးတဲ့ မောင်ကြေးမုံ မာမာအေး မေ ၁၀၊ ၂ဝဝ၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေး ချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေ အားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ မာအေးလည်း မောင်ကြေးမုံ အကြောင်းကို သံချပ်မင်းသားက စပြီး ကျော်ကြားလာတာ လို့ ပြောမိတော့ သံချပ် ဆိုတာ ဘယ်ကလာ ဆိုတာမျိုး ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ လုပ်၊ စာ စာချင်း အမျိုးလိုက်စပ်၊ သံချပ်နဲ့ တူပါတယ် လို့ ခံစားမိနေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဟစ်(ပ)တွေ ပေါ့(ပ)တွေထဲ လိုက်မွှေနှောက်၊ အဲဒီရောက်တော့ ‘နာဂစ်’သံ ပြန်ကြားရတယ်။ ‘ဧရာဝတီရေ အားတင်းထား’...
>NLD and 2010 challenges
> ၂ဝ၁ဝ စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မောင်ရွှေမေ ၁ဝ၊ ၂ဝဝ၉“- – သူနဲ့ ဒေါ်စုတို့ သက်ရှိ ထင်ရှား ရှိနေတုန်း ယခုအချိန်မှာ သူတို့နှစ်ဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ကြရင် မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်ခေတ် ဘယ်အခါနဲ့မှ မတူတဲ့ ညီညွတ်မှုတစ်ခုကို အရယူနိုင်တယ် – – ” အပြည့်အစုံသို့ No tags for this post. Related posts No related posts.
> မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဒဂုန်တာရာ အသက် ၉၀ ပြည့် အမှတ်တရ (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) မိုးမခ မေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ၂၀၀၈ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိတ်ဆုံပွဲမှာ ဆရာဒဂုန်တာရာ ပြောကြားတဲ့ – ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာ ရှိဆိုတဲ့ စကားအမှတ်တရကို သတင်းအဖြစ် တင်ဆက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဆရာ အဲသည် ပွဲမှာ အကျယ်တ၀င့်ပြောကြားခဲ့တာကို စာနဲ့လည်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး အသံနှင့်လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခု အဲသည် သတင်းတိုလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပါတယ်။ ဒဂုန်တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ မောင်မိုးသူတိုႚ စာရေးဆရာမဵားရဲႚ လတ်ြလပ်ရေးနေႚႛ မိတ်ဆုံပြဲတငြ်ေူပာုကသည့် စကားလက်ဆုံ အမတ်ြရမိသည်မဵား မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ ဇန်န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဇန်န၀ၝရီ ၄...
>Muse Locals forced to pay expenses for primer’s visit
> မူဆယ် – နမ်းခမ်း က ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ်ဖွင့်ပွဲ ၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန် ဒေသခံစာရိတ်နှင့် ဖွင့်ပွဲလုပ်မည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၄ မေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်အနီး နမ်းခမ်းတွင် တည်ဆောက်နေတဲ့ ရွှေလီရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်၍ စစ်အစိုးရ၏ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ဗိုလ်သိန်းစိန်လာရောက်ဖွင့်မယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ၂၀၀၆ မှ စတင်ပြီး ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာမှာ ဒေါ်လာ ၁ သန်း သုံးစွဲပြီဖြစ်တဲ့ တရုတ်နဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ ဖက်စပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတခုရဲ့ ဖွင့်ပွဲကို ဒေသခံပြည်သူတွေက စာရိတ်များ၊ အလှူငွေများ ကျခံပြီး ပြုလုပ်ပေးရန် စစ်အာဏာပိုင်တွေက အမိန့်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “၀န်ကြီးချုပ်က သူထိုင်ဖို့ သီးသန့်ထိုင်ခုံတခု လုပ်ခိုင်းတယ်လို့ ဆိုတယ်။ မဆလခေတ်က...
>NLD calls for Daw Suu medical care
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆေးကုသခွင့် ပေးရန် အဖွဲ့ချုပ်က တောင်းဆိုAFP သတင်းဌာနမေ ၁၀၊ ၂၀၀၉ ၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လက ဒဏ်ရာများဖြင့် အနားယူနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ထိုစဉ်က ဧရာဝတီတိုင်းသို့ ခရီးထွက်စဉ် ညောင်တုန်းမြို့နယ်အတွင်း တားမြစ်ခံရသည်။ ကားအတွင်း ၆ ရက်ကြာ အစားအစာ မရှိဘဲ ခရီးထွက်ခွင့် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အာဏာပိုင်တို့က သူ့ကို အကြမ်းဖက် ဖမ်းဆီးပြီး ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်သို့ ပြန်ပို့လိုက်သည်။ (ဓာတ်ပုံ – ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှု အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မရှင်) အထိန်းသိမ်းခံနေရသူ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆေးကုသခွင့် ပေးရန် သူ၏ ပါတီက ယနေ့ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သူ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်မကင်း...
> ဆိုးဆေးသုံး လက်ဖက်စာရင်းတွင် မပါဝင်သည့် ဒေါ်ရိတ်ကြီးနှင့် အင်တာဗျူး Flower News ဂျာနယ် မေ ၉၊ ၂ဝဝ၉ နာမည်ကျော် ဒေါ်ရိတ်ကြီး လက်ဖက်သည် မကြာသေးမီက အန္တရာယ်ကြီးသည့် အဝါရောင်ဆိုးဆေး အသုံးပြုသော လက်ဖက် အမျိုးပေါင်း တရာကျော် စာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပေ။ စာရင်းတွင် ပါဝင်သွားသော ဘဝတူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် ဝမ်းနည်းမိသည်ဟု ဆိုသည်။ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရား အနီးတွင် အစပြုခဲ့သော လက်ဖက်နှင့် အစားအစာ မျိုးစုံ ရနိုင်သော ဒေါ်ရိတ်ကြီးဆိုင်သည် သက်တမ်း ၂ဝ ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်မှ စတင်၍ အသင့်စား လက်ဖက် နှင့် အကြော်စုံများကို City Mart...
>striker Myo Hlaing Win becomesasoccer coach
> တိုက်စစ်မှူးဟောင်း နည်းပြဆရာ မျိုးလှိုင်ဝင်းဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၉၊ ၂၀၀၉ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် FC အသင်း နှင့် စာချုပ် ချုပ်ဆိုနေသော နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မျိုးလှိုင်ဝင်း။ ယမန်နေ့က ချုပ်ဆိုသော စာချုပ်အရ မျိုးလှိုင်ဝင်းသည် ထိုအသင်းတွင် လစာငွေ ကျပ် ၁ဝ သိန်း ရရှိမည် ဟု သိရပြီး နည်းပြချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူရမည်ဟု ဆိုသည်။ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် FC နည်းတူ မကြာသေးမီက တည်ထောင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂလိက ဘောလုံးအသင်း အများစုတွင်လည်း နည်းပြချုပ်၏ လစာမှာ ကျပ် ၁၀ သိန်း၊ လက်ထောက် နည်းပြများမှာ ကျပ် ၅ သိန်းစီ ဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံ – ကြေးမုံသတင်းစာ) No tags for this...
>Daw Suu’ health (up date)
> ဒေါ်စု၏ ကျန်းမာရေး စိတ်ချရသည့် အခြေအနေတွင် မရှိသေးမိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂မေ ၉၊ ၂၀၀၉ ပြီးခဲ့သည့်လက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ဘက်သို့ ကြည့်နေကြသူများ (ဓာတ်ပုံ – AFP ) အကြောဆေး ပုလင်းကြီး သွင်းနေရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေးသည် စိတ်ချရသည့် အခြေအနေတွင် မရှိသေးကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။ အသက် ၆၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ဒေါ်စုသည် သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ “မနေ့က ဒေါ်ပြုံးမိုအိက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကို သွားပြီး Drip (အကြောဆေး ပုလင်းကြီး) သွင်းပေးတယ်။ ဒီနေ့လည်း ကုသမှု လိုအပ်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာကို ခွင့်တောင်းထားတယ်လို့ သိရတယ်။...
>2 Burmese fishermen in the ice box become Australia residents
> ရေခဲပုံးထဲမှ မြန်မာလူငယ် ၂ ဦးကို သြစတေးလျက နေထိုင်ခွင့်ပေးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၈မေ ၉၊ ၂၀၀၉ ရေခဲပုံးထဲမှ လက်ဝှေ့ယမ်းပြနေသူ မြန်မာ ၂ ဦး (ဓာတ်ပုံ –Australian Customs: Border Protection Command) လွန်ခဲ့သည့် ၃ လက သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ ရေခဲပုံးဖြင့် ရောက်သွားသည့် မြန်မာငါးဖမ်းလုပ်သား၂ဦးကို သြစတေးလျအစိုးရက နေထိုင်ခွင့် ပေးလိုက်သည်။ ထို ၂ ဦးမှာ ကိုကိုဦး (အသက် ၂၂ နှစ်)၊ သောင်းထိုက် (အသက် ၂၄ နှစ်) တို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ငါးဖမ်းလှေ တိမ်းမှောက်ပြီးနောက် ပင်လယ်ထဲတွင် တလနီးပါးခန့် အသက်ရှင် နေထိုင်ခဲ့သူများအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ လူဝင်မှု...
>Maung Swan Yi – Earth Day
> ကမ္ဘာမြေ နေ့မောင်စွမ်းရည်မေ ၉၊ ၂၀၀၉ ကမ္ဘာ့မြေနေ့ငါ မေ့နေမိ။ ငါမေ့နေလဲကမ္ဘာမြေကငါ့ကို မမေ့၊ ငါလို မမေ့ရွေ့မြဲ ရွေ့ရင်း“နေ့”က ”လ” ဖြစ်၊ “လ”က “နှစ်”ဖြစ်တနှစ် တိုးခဲ့ပါလေပြီ။ တနှစ်တိုးလို့တိုးမြဲ တိုးသကိုး၊ ထင်ရိုးထင်ဆဲဆုတ်မြဲ ဆုတ်တာ၊ ငါမသိလိုက်။ သစ်တောတွေလဲ ဆုတ်မြဲ ဆုတ်သတဲ့။ သစ်သီးတွေလဲ ဆုတ်မြဲ ဆုတ်သတဲ့။ ပန်းပွင့်တွေလဲ ဆုတ်မြဲ ဆုတ်သတဲ့။ ပန်းလိပ်ပြာလဲ ဆုတ်မြဲ ဆုတ်သတဲ့။ ချိုးလင်းပြာလဲ ဆုတ်မြဲ ဆုတ်သတဲ့။ သမင် နွားကျွဲ ဆုတ်မြဲ ဆုတ်သတဲ့။ အလို !ငါ့သက်တမ်းဟာ “တရာ” ဆိုရင်နှစ် တရာ မျိုး၊ တနှစ်တိုး တိုင်း၉၉ နှစ် ကျန်ပါတကား။ ။ (ဧပြီ ၂၂၊...
>student movement 15
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၁၅)“၁၉၇၄ ဦးသန့်ဈာပန”(ပထမပိုင်း)အောင်ဝေးမေ ၉၊ ၂ဝဝ၉ “ – – – ဦးသန့်ရုပ်ပုံ ပန်းချီကားချပ်ကြီး နောက်ခံနဲ့ အုတ်ဂူမှာ သာသနာ့အလံ၊ ကုလသမဂ္ဂအလံ နဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံ အလံသုံးလက် ယှဉ်တွဲ လွင့်ပျံ နေပါတော့တယ် – – -” ၁၉၇၄ ဇွန်လ(၆)ရက် အလုပ်သမား အရေးအခင်း ပြီးတဲ့နောက်မှာ ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ အရေးအခင်းကတော့ ၁၉၇၄ ဒီဇင်ဘာ ဦးသန့်ဈာပန အရေးအခင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၄ မဆလ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေအောက်မှာ စစ်တပ် အုပ်စိုးမှုရဲ့ ဒဏ်ကို ကျောင်းသားထုနဲ့ အလုပ်သမား လယ်သမား ပြည်သူ တရပ်လုံး ခါးစည်းခံနေကြရပါပြီ။ ဒီလို အချိန်မှာပဲ...
>Anniversary of Nargis
> သေသူအတွက် နှစ်လည်ဆွမ်းနဲ့ ရှင်သူရဲ့ ဒုက္ခ ၀င်းမြတ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ မေ ၉ – ရွာအစွန် လယ်ကွင်းစပ်နားက အိမ်အဟောင်းနေရာမှာ ဆိုက္ကားဆရာ ကိုဝင်းစိုး (၅၅ နှစ်) မတ်တပ် ရပ်နေပြီး သူ့ဇနီး၊ သားနဲ့ သမီးကို ပါးစပ်က တလှုပ်လှုပ်နဲ့ တီးတိုး ခေါ်နေတယ်။ သူ့မိသားစုဟာ သည်နေရာတစ်ဝိုက်မှာ လှည့်လည် သွားလာ နေလိမ့်မယ် လို့လည်း သူ ယုံကြည်နေတယ်။ နာဂစ် မုန်တိုင်း မတိုက်ခတ်ခင် အထိ သည်နေရာလေးမှာ ကိုဝင်းစိုးတို့ မိသားစု သိုက်သိုက် ၀န်းဝန်း ရှိခဲ့ကြတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေ ၂ – ၃ ရက် တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းနာဂစ်ကြောင့်...
>Dagon Tar Yar – From Mone To Calilfornia
> မုန်းမှ ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ ဒဂုန်တာရာ မေ ၉၊ ၂၀၀၉ အူပည့်အစုံသိုႛ … No tags for this post. Related posts No related posts.
>Daw Suu’s doctor is detained
> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆရာဝန် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂မေ ၉၊ ၂၀၀၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိသားစု ဆရာဝန် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံနေရသည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပြောဆိုကြောင်း AP သတင်းတပုဒ်တွင် ရေးသားထားသည်။ ဒေါ်စု၏ ခြံဝင်းအတွင်သို့ သွားရောက်ခဲ့သော နိုင်ငံခြားသားတဦး ဖမ်းဆီးခံရသည်ဟူသော သတင်း ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင် ထိုသို့ ထိန်းသိမ်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်သည် ဒေါ်စုအား တလတကြိမ် ဆေးစစ်ပေးရန် ကြာသပတေးနေ့က ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း အာဏာပိုင်တို့က ခွင့်မပြုခဲ့ဟု သိရသည်။ ထိုညနေတွင် အာဏာပိုင်တို့က ဆရာဝန်အား နေအိမ်သို့ သွားရောက်ပြီး ဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရ အရာရှိ ဦးဉာဏ်ဝင်းက AP သတင်းဌာနကို ရှင်းပြသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်...
>Cartoon Saw Ngo – Security of Daw Suu
> ကာတွန်းစောငို – ဒေါ်စုလုံခြုံရေး မေ ၉၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 819 of 902«1...817818819820821...902»
>Cartoon Saw Ngo - 2010 Armed Election
>Invitation for Fortwayne Thagyan
မဲဆောက်နဲ့ အိုင်စီည မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
>Than Lwin Tun of VOA visits Rangoon
မြန်မာ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် အကြားအငြင်းပွားခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ပြင်နယ်နိမိတ်ပိုင်ဆိုင်မှု တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ရှင်းလင်းချက်
>Cartoon Saw Ngo – National reconciliation